नेपाल राष्ट्र बैङ्क घाटामा | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर नेपाल राष्ट्र बैङ्क घाटामा
on: १४ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०८:१२ मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । विगत ४ आर्थिक वर्ष (आव)मा लगातार खुद नाफा कमाएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क गत आवमा भने घाटामा गएको छ । यद्यपि, केन्द्रीय बैङ्क नाफामूलक संस्था भने होइन । गत आवमा बैङ्कले रू. ७ अर्ब ५० करोड खुद नोक्सान बेहोरेको छ ।
सधैं नाफामा रहने केन्द्रीय बैङ्कले एकैपटक ठूलो नोक्सानी देखाएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यसलाई चासोका साथ आप्mनो प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ । गत आवमा विदेशी विनिमय पुनर्मूल्याङ्कनमा मात्रै बैङ्कले रू. २२ अर्ब ८३ करोड नोक्सान बेहोरेको छ भने सुनचाँदी कारोबारमा रू. ३ अर्ब ८७ करोड घाटा खाएको छ । त्यसमा आन्तरिक बजारमा गरेको अन्य लगानीबाट प्राप्त नाफा समायोजन गर्दा खुद नोक्सान रू. ७ अर्बमा झरेको बैङ्कले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव २०६९/७० रू. २३ अर्ब १७ करोड रहेको बैङ्कको खुद आय २०७१/७२ मा आइपुग्दा रू. १२ अर्ब ७ करोडमा झरेको तथ्याङ्क छ । यस्तै आव २०७२/७३ मा रू. ३७ अर्ब ७६ करोड खुद आय आर्जन गरेको बैङ्कले २०७३/७४ मा भने साढे ७ अर्ब नोक्सान बेहोरेको छ । अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित भए पनि राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य भने नाफा आर्जन गर्नु होइन । उसको मूल उद्देश्य मूल्यस्तर, विनिमयदर तथा वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता हो । यी उद्देश्य अनुरुप बजार हस्तक्षेप गर्दा कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैङ्कलाई घाटा हुन्छ ।
राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल पनि केन्द्रीय बैङ्कको उद्देश्य नाफा कमाउने नभएको तर्क गर्छन् । यद्यपि केन्द्रीय बैङ्कले विभिन्न कोषमा रहेको रकम रणनीतिकरूपले परिचालन गर्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा नाफानोक्सान हुने गरेको उनको भनाइ छ । केन्द्रीय बैङ्कले प्राप्त गरेको नाफाको केही प्रतिशत सरकारले प्रयोग गर्छ । राष्ट्र बैङ्कका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाका अनुसार प्रायः राष्ट्र बैङ्कको खर्चभन्दा आम्दानी धेरै हुने गर्छ । सो आम्दानीबाट खर्च कटाएर बचेको केही रकम विभिन्न कोषमा राखेर लगानीसमेत गर्छ । ‘त्यस्तो लगानीबाट कहिले नाफा हुन्छ त कहिले नोक्सान,’ उनले भने ।
केन्द्रीय बैङ्कको सञ्चालक समितिले कोषमा उपलब्ध रकमलाई विभिन्न उपकरणमा लगानी गर्छ । अर्थविद् भने राष्ट्र बैङ्कले नाफा कमाउने उद्देश्यले लगानी गर्न नहुने तर्क गर्छन् । अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउने काम गर्ने केन्द्रीय बैङ्कले नाफाघाटाको हिसाब गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।